Maareeyaha Helitaanka Faylka - Liiska Faylka Fudud
Kordhintaasi waxay ku daraysaa awooda xadida faylka iyo liistada galaangalka dadka aad dooratay.
Helitaanka Manager File waxaa loogu talagalay in aad u wejiyo, aad u ogolaanaya in ay habayn wanaagsan helaan user in files, liisaska file iyo maamulka. U samee liistooyin faylal aan xadidneyn oo loogu talagalay shakhsiyaadka ama kooxaha, mid kasta oo leh jaangooyooyin dhammaystiran oo gooni ah iyo rukhsadaha isticmaala. Liis kasta liis gareynta dheeriga ah ee isticmaaleyaasha waxaa lagu dabaqi karaa faylka gelinta, maareynta faylka dhinaca-hore, iyo awooda lagu koobiyo faylasha liistooyinka kale.
Qor Liistada Goobta Goobta Helitaanka
Waxaad ku qeexaysaa liiska koodhka si fudud sidan oo kale…
Adeegso tabannada liiska liistada si aad u qeexdo wax qabadka. Haddii aad liis isku mid ah ku leedahay meelo badan, jaangooyooyin badan oo-fuulid adoo adeegsanaya Sifooyinka gaagaaban sidii loogu baahnaa.
Abuur liistooyin faylal dheeri ah, midkasta oo leh qaabkeeda iyo rukhsadaha gelitaanka isticmaale. Siinta adeegsadayaasha khaaska ah fayl, ama u oggolaato marin liistada dhammaan liistada ku saleysan isticmaaleyaasha WordPress ama doorar.
Quful faylashaada si looga hortago gelitaanka tooska ah. Kaliya u oggolow isticmaaleyaasha gaarka ah inay arkaan feylka aad rabto.
Ku xaddid gelitaanka faylka isticmaalayaasha gala-keliya. Sheeg doorka ugu yar ama cadee doorka isleeg.
U samee liistada faylka loogu talagalay isticmaale WordPress gaar ah ama koox adeegsada.
Hab kasta oo liistada ah waxaad gooni u xakameyn kartaa rukhsadaha gelinta faylka gelinta iyo maaraynta faylka dhinaca-hore.
Abuur Liistada Noocyada ah
Heer caadi ah
Ha xaddidin gelitaanka. Faylasha waxaa arki kara qof kasta oo gaari kara bogga liiska faylka. Faylasha sidoo kale waa lala xiriirin karaa meel ka baxsan websaydhkaaga.
Xaddid liiska liistada faylka dhammaantiis marka laga reebo kuwa isticmaala WordPress ee u dhigma door la cayimay ama leh door ugu yar ama ka sareeya.
Xaddid liiska liistada faylka ee koox gaar ah oo adeegsadayaasha WordPress ah.
Xaddid liiska liistada faylka ee loo adeegsado isticmaale WordPress gaar ah.
Xaddid u helista dhammaan faylasha sida caadiga ah. Ubiir galaangal u leh feylasha gaarka ah adeegsadayaasha khaaska ah.
Liis kasta oo nooc ah waxaad ku xadidi kartaa ficilladaan door isticmaale; gelinta faylka, maaraynta faylka dhinaca-hore iyo awooda lagu wareejiyo faylasha liisaska kale.
Admins-ka WordPress ayaa had iyo jeer marin u heli kara dhammaan faylasha iyo liistooyinka faylka.
Hababka Liiska faylka
Habka caadiga ah wuxuu u oggolaanayaa gelitaanka faylka iyada oo aan xaddidnayn. Isticmaal hab this for files waa in uu noqon dadweynaha u furan. Qaabkan, feylasha sidoo kale waa lagu xiriirin karaa meel ka baxsan websaydhka, bogagga internetka, warbaahinta bulshada ama fariimaha emaylka.
Qaabka loo adeegsado isticmaale keliya. Liiska Isticmaalaha lihi wuxuu yeelan karaa faylal qaas ah iyo faylal ay si gaar ah ugu deeqayaan gelitaanka.
Habkani wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa siinta dadka isticmaala liistadooda faylka.
Habka Kooxda ayaa lamid ah Isticmaalaha Isticmaalaha. Maamulka ayaa qeexaya isticmaaleyaasha arki kara feylasha. Kaalinta isticmaaleyaasha looma tixgelin doono. Dhammaan xubnaha kooxda way arki karaan faylalka oo dhan.
Hab-kooxeedku wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa wadaagidda feylasha u dhexeeya dad tiro yar oo dad ah.
Qaabka Xaddidan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xaddido aragtida liistada liistada ee WordPress Role. Waxaa jira laba nooc oo doorka isbarbardhigaya: Kan ugu yar iyo Isbarbardhigaya. Ugu yar ayaa adeegsata doorarka WordPress-ka ku dhisan:
Haddii aad liiska u qorto marinka ugu yar ee qoraaga, kaliya adeegsadayaasha Qoraaga, Tifaftirayaasha iyo Maamulka ayaa arki doona faylalka.
Isticmaalka qaabka Match Role wuxuu micnaheedu yahay in KALIYA dadka isticmaala WordPress ee qoraaga ay arki doonaan liiska faylka. Si ka duwan doorka Ugu Yar, Doorka Match wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka doorato mid kasta oo ka mid ah doorarka caadada u ah goobtaada.
Isticmaal a Editor Role User plugin oo ay weheliso Maareeye Helitaan File ayaa faa'iido badan yeelan kara.
Iyadoo la Xaddiday Qaabka, feylasha si qarsoodi ah ayey ku qarsoon yihiin. Maamulka WordPress-ka ayaa oggol gala aragtida marin u helka adeegsadayaasha khaaska ah. Isticmaalayaasha faylka geliya faylasha, haddii taasi la oggolaado, waa laga xaddidi doonaa inay arkaan faylalkooda sidoo kale.
Hab xaddidan ayaa loo adeegsan karaa in lagu abuuro liistada faylka oo ay adeegsadayaashu ku dari karaan oo maareeyn karaan faylal u gaar ah, halka Maamulka uu hal meel ku yaal dhammaan faylalka ku jira hal meel.
Bixinta Helitaanka Faylka Isticmaalayaasha
* Dhamaan hababka marka laga reebo Caadiga ah, Maareeyaha Helitaanka faylka ayaa isku dayi doona inuu xannibo xiriirinaya toos ah (kuleyl kulul-xiriirinta) feylashaada.
Liiska Admin Liiska
Liiska Jiidashada Liistada wuxuu ka muuqdaa dusha sare ee Liiska Mareynta Admin. Si aad ugu beddelatid inta u dhexeysa liistada faylka, adeegso istudurka-ka-galka iyo badhanka Go. Muuqaalka liiska hadda jira ayaa dib ula cusbooneysiin doona liiska la xushay.
Dhagsii badhanka Maareynta Liistada si aad u tagto Maareeyaha Liiska Faylasha, halkaas oo aad ka arki karto faahfaahinta liiska oo tirtirto liiska.
Dhagsii badhanka Abuurista Liiska cusub si aad u furato liiska wada hadalka cusub.
Fure-ka-toosi ee loo baahan yahay si loo muujiyo liiska hadda jira waxaa lagu muujiyey dhinaca midig ee bidix Ballaarinta.
Abuurista Liisaska Cusub
Si aad u abuurto liistada faylka cusub, dhagsii badhanka Liiska Abuurista oo u dhow dusha sare ee Liiska Faylasha Liiska faylka. Sii liistada cinwaanka oo caddee dariiqa liiska faylka. Tan ayaa si otomaatig ah loogu gelin doonaa adiga oo ku saleysan cinwaanka, laakiin waad baddali kartaa haddii aad rabto. Dooro wadada si taxaddar leh, maadaama tan mar dambe aan la beddeli karin.
Abuur Liis Fayl
Xulo habka liiska faylka ka dibna dhagsii badhanka Abuurista Liiska Faylka. Liiska cusub ayaa la abuuri doonaa oo jaangooyada Ogolaashaha Howlgalka Liiska ayaa soo muuqan doona.
Liisaska Oggolaanshaha Howlgallada
Nooc kasta oo nooc nooc ah, waxaad si gaar ah u qeexeysaa rukhsadaha gelinta faylka, awoodda aad u maareyn karto liistada faylka iyo awoodda aad u koobiyeyn karto faylasha iyo faylalka liiska liistada kale.
Qofna - Muuqaalka ayaa naafo ah.
Isticmaalahan / kooxdani (Hababka Isticmaalaha iyo kooxdan)
Doorka Ugu Yar - Kaliya isticmaale la soo galo doorkan ama ka sareeya.
Doorka ciyaarta - Kaliya u adeegso adeegsanaya doorkan gaarka ah.
Cid kasta - Qof kasta, oo ay ku jiraan kuwa isticmaala dadweynaha.
* Isticmaalayaasha doorka Maamulaha ayaa had iyo jeer awood u yeelan doona inay arkaan oo maareeyaan dhammaan liistooyinka faylasha.
U deji xadka cabirka ugu badan ee liiska faylka. Marka xadka la gaaro, uploading-ka lama ogolaan doono ilaa feylasha laga saaro ama xadka la kiciyo.
Xaddid doorka ugu yar ee tixgelinta la siinayo marka aad isticmaaleyaasha ku dari liistada. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in doorashooyinka la maamuli karo haddii aad leedahay isticmaaleyaal badan.
Dooro in lagu ogeysiiyo emaylka wixii faylk ah la soo diro. Maamulaha liistada ayaa heli kara nuqul indha la 'ee ogeysiis kasta oo la soo geliyo ogeysiis.
Maareeyaha Liiska Faylka
Maareeyaha Liistu wuxuu soo bandhigayaa dhammaan liistooyinka faylkaaga sida tiles information ka kooban macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan liiska iyo xiriiriyeyaasha adeegsiga.
Faleemka waxaa lagu kala soocayaa liiska Aqoonsiga marka hore, laakiin waxaad dooran kartaa inaad magac ugu kala saarto.
Tirtirka Liistada Faylasha
Waad tirtiri kartaa liistada faylka markii loo baahdo. Ikhtiyaar ahaan dooro inaad tirtirto galka liiska faylka sidoo kale.
Hubinta sanduuqa micnaheedu waa in dhammaan faylasha iyo faylalka ku jira liistadan la tirtiri doono weligood iyo weligood.
Hadaad abuurto liistada faylka cusub adoo adeegsanaya tusaha jira ee liistada horey loo tirtiray, wixii faylasha iyo faylasha ah ee haray waxaa toos loogu dari doonaa liiska cusub.
Maareeyaha Helitaanka Faylka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto liistada faylka badan oo madax-bannaan, mid walboo leh qaabeynta iyo rukhsadda looga baahan yahay liistada faylka gaarka ah.
Kordhinta Liistada Faylasha Fudud ee Pro ayaa sanado qaadatay sameynta. Isticmaalayaal badan ayaa muujiyay baahida loo qabo xannibaadaha isticmaaleyaasha tanina waa natiijada ka soo baxda dhammaan fikradooda.
Hel Maareeyaha Helitaanka Faylka Hadda
Haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto sida dhamaadka-gadaal u shaqeeyo, fadlan codso soo gal qiimeyn halkan. Waxyar aan ka ogaado baahiyahaaga waxaanan isku dayi doonaa inaan waxoogaa hagitaan ah ka bixiyo.